Musuqmaasuq weyn oo hareeyay doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMusuqmaasuq weyn oo hareeyay doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya
Sawir si qarsoon looga qaaday Odayaal Soomaali ah oo qeybsanaya lacago laaluush ah oo ay ka heleen doorashada. [Sawirka: Twitter]
Garoowe-(Puntland Mirror) Kiisas musuqmaasuq oo aad u weyn iyo cabsi gelin codeeyaha ayaa hareeyay doorashooyinka hadda socda ee baarlamaanka Soomaaliya, sida uu warbaahinta u sheegay hanti-dhowraha guud ee Soomaaliya.
Janaraal Nuur ayaa warbaahinta u sheegay in muasharixiinta qaar ay iyagu soo qorteen ergooyinka codaynaya si ay iyaga ugu codeeyaan.
War-saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen asbuucii tagay, Qaramada Midoobay iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ayaa waxay ku sheegeen in ay ka walaacsanyihiin musuqmaasuqa la sheegay in ay ka jirto doorashada xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliya.
War-saxaafadeedka ayay ku sheegeen in ay si buuxda u taageersanyihiin go’aanada guddiga doorashooyinka dadban iyo guddiga khilaafaadka ee Soomaaliya ay ku sheegeen in la joojin doono natiijooyinka doorashada ee sida khaldan lagu sameeyay.
Soomaaliya ayaan lahayn dowlad qaran oo shaqaysa tan iyo 1991 ilaa iyo markii awooda laga tuuray madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Bare.
July 13, 2017 Maamulka Hir-Shabeelle oo xiray macalimiin iskuul oo kulan la yeeshay maleeshiyada Al-Shabaab